အင်္ဂါနေ့, မတ်လ 29, 2011 တနင်္လာနေ့, ဇန်နဝါရီလ 1, 2018 Douglas Karr
မှာငါ့မိတ်ဆွေကောင်းမှ Bravo မင် - ကျနော့်အမြင် - ဝန်ကြီးချုပ် အွန်လိုင်းပုံစံဆောက် စျေးကွက်သမားတွေအတွက်တော့ဟုတ်တယ်၊ Landing Page မဟာဗျူဟာကိုရေးဆွဲရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ရင်ဆိုင်ရသောခက်ခဲသောလုပ်ငန်းတစ်ခုမှာအမှန်တကယ်ပင်ထိုမြေပေါ်စာမျက်နှာများကိုတည်ဆောက်ရန်ဖြစ်သည်။
ဒါဟာပြproblemနာတော့ဘူးတော့! မင် သင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိစာမျက်နှာများကိုတည်ဆောက်ရန်၎င်း၏ Landing Page ဖြေရှင်းချက်ကိုယခုပင်ထုတ်ဝေလိုက်ပြီဖြစ်သည် မင် ပုံစံများ။
အကယ်လို့သင်ကအထွက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းဗျူဟာတွေကိုကျင့်သုံးနေတယ်ဆိုရင်၊ မင် သင့်ရဲ့ဆင်းသက်စာမျက်နှာများကိုတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်စုစည်းဖို့။ သငျသညျအနည်းငယ်သာကြိုးစားအားထုတ်မှုနှင့်အတူတစ်ခုတည်းမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးအဘို့အတ ဦး တည်းထုတ်ဖော်နိုင်သည်!
မတ်လ 29, 2011 မှာ 10: 23 pm တွင်
ဆင်းသက်သည့်စာမျက်နှာအသစ်များသည် PPC အတွက် အလုပ်လုပ်နိုင်ပါသလား။ URL မှာ ကန့်သတ်ချက်တွေက ဘာတွေလဲ။
မတ်လ 31, 2011 မှာ 8: 16 pm တွင်
Chris သည် သင်မြင်ဖူးသည့်အတိုင်း စာမျက်နှာကို သင်နှစ်သက်သလို ပြသရန် မျက်နှာဖုံးစွပ်ထားသော url ကို အသုံးပြုရမည်ဖြစ်သည်။ အချိန်နဲ့အမျှ ပြောင်းလဲလာမယ်ဆိုတာ သေချာပါတယ်။